Filohan’ny Antenimierampirenena : “Tsy misy fanangonan-tsonia izany” | NewsMada
Filohan’ny Antenimierampirenena : “Tsy misy fanangonan-tsonia izany”
“Ny amin’ny fanangonan-tsonia, heverina fa toy ny fampitam-baovao rehetra. Mbola tsy hita ny porofo hoe fa efa voaangona ny sonia.” Izay ny fanazavan’ny filohan’ny Antenimierampirenena, Razanamahasoa Christine, teny Tsimbazaza, omaly, momba ny resaka mandeha ny amin’ny fisian’ny fanangonan-tsonia hanaovana fitsipaham-pitokisana ny praiminisitra.
Aminy, tsy voamarina ny amin’izay fanangonan-tsonia izay. Ny solombavambahoaka IRD no manana ny maro anisa eo anivon’ny Antenimierampirenena, ary tsy mbola ahazoana porofo hoe misy an’izay fanangonan-tsonia izay.
Mila fampahafantarana ny Antenimierampirenena…
“Tsy mbola nampahafantarina izahay. Raha ny tokony ho izy: raha vao mivoaka ny didin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), misalotra avy hatrany ny anaran’ny solombavambahoaka io solombavambahoaka io”, hoy kosa izy momba ny raharaham-pitsarana mahakasika ny solombavambahoaka Razafindrazalia Yvonne, vadin’ny solombavambahoaka Raveloson Ludovic Adrien na i Leva, ary misolo toerana azy eny anivon’ny Antenimierampirenena.
“Koa na inona na inona mahakasika azy amina raharaha fanenjehana na raharaham-pitsarana, mba tokony ho nisy fampahafantarana anay”, hoy ihany ny filohan’ny Antenimierampirenena. Tsy mbola nampahafantarina ry zareo , ary tsy mbola fivoriana ara-potoana koa izao. Eo anelanelan’ny fivoriana ara-potoana ny mahavoatana azy, tokony hotanterahina ary takin’ny Antenimierampirenena ny fampahafantaran’ny tomponandraikitra izay mahazo ny solombavambahoaka.